MatrixWater Dance Speaker | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
Matrix Water Dance Speaker
Seller Name : Matrix Computer and Accessories
Built-in amp, Bluetooth(R) 2.1+ EDR compatible, Hi-fi audio
Ks 30,000 -40%
ရောင်းချသူ Matrix Computer & Accessories Shop
Sai Kaung Myat
Matrix Water Dance Speaker အသံထွက်ကောင်းသလို ရေပန်းလေးတွေလဲပါတော့ အရမ်းကဗျာဆန်တယ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
Matrix Water Dance Speakerကျွန်မအရမ်းကြိုက်လို့ဝယ်ထားတာ မောင်လေးက တွေ့တော့ ယူသွားပြန်တယ် အရမ်းကြိုက်တယ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
Ko Nay Myo Htun
2017 ဇှနျ 5
Matrix Water Dance Speakerအသံလေးရော ရေပန်းလေးရော အရမ်းအဆင်ပြေတယ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2017 မေ 4
when relax time I use this speaker, it good sound system. I usually this when I drive, and take rest time in my home. and its very romantic, beautiful light. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
Matrix ၏ Water Dance Speaker သည် အခြားစပီကာများနှင့်မတူပဲ ဆန်းပြားသော ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ LEDမီးများအကြား စည်းချက်နှင့်အညီ ကခုန်နေသောရေများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းသော စပီကာ ဖြစ်သောကြောင့် အသံကျယ်ရုံသာမက အသံထွက်လည်းကောင်းပါသည်။ နည်းပညာဆန်းသစ်သကဲ့သို့ ဒီဇိုင်းလည်းဆန်းသည်မို့ ထူးခြားမှုကို နှစ်သက်သူများ အလွန်အကြိုက်တွေ့စေမည့် စပီကာလေးဖြစ်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Water Dance Speaker